Wararka - Waa maxay kormeeraha heerka garaaca wadnaha?
Waxa loogu yeero kormeerka garaaca wadnaha waa saacad si sax ah u duubi karta garaaca wadnaheena waqtiga dhabta ah inta lagu guda jiro jimicsiga. Doorka kormeeraha garaaca wadnaha ee jimicsiga ujeedada leh waa mid aad u muuqata.
Waxaa jira laba mabaadi'da guud ee cabbirka miisaanka garaaca wadnaha, midna waa habka cabbirka wadnaha ee hadda jira, midna waa habka cabbirka gudbinta sawir-koronto.
Qiyaasta wadnaha ee hadda jira
Jidhkeena bini'aadamku wuxuu soo saari doonaa qulqulka wadnaha markasta oo wadnuhu garaaco, siligga wadnaha ee xarkaha wireless waa qalab noocan oo kale ah oo dareemi kara xaddiga wadnaha. Qeybta cirifka ee dareenka ayaa ku taal labada dhinac ee hore ee laabta xabadka. Ka dib marka isticmaaluhu xirto faashadda xabadka, qaybta cirifka ee xabadka xabadka ayaa ururiya baaxadda isbeddelka xawaaraha wadnaha ee jimicsiga, ka dibna wuxuu u dirayaa mitirka garaaca wadnaha iyada oo loo marayo tikniyoolajiyadda gudbinta wireless si loogu beddelo qiimaha BPM ee heerka garaaca wadnaha fiirsasho fudud. Waqtigan xaadirka ah, kani waa habka guud iyo kan saxda ah ee lagu cabbiro garaaca wadnaha inta lagu jiro jimicsiga.
Mabda'a wuxuu la mid yahay kan koronto-dhaqaaqa. Faa'iidada kale ee habkan lagu cabbiro garaaca wadnaha ayaa ah in si joogto ah loo qiyaasi karo inta lagu jiro jimicsiga.
Habka cabbirka sawir-koronto
Cabbiraadaha sawir-qaadaha ayaa adeegsada isbeddelada nuugista haemoglobin ee xididdada dhiigga si loo qiyaaso garaaca wadnaha. Saacaddu waxay ku qalabeysan tahay wareegga wareegga infrared gudbinta loop iyo wareegga qaata iyo milicsiga. Faa'iidada habkani waa inay fududahay in la cabbiro garaaca wadnaha iyadoon xabadka xabadka laga xiri karin. Si kastaba ha noqotee, maxaa yeelay calaamaddu waa mid aad u daciif ah oo aad u fudud in lagu farageliyo adduunka ka baxsan, xogta cabbiraaddu sax ma ahan, guud ahaanna waxay u baahan tahay in lagu cabbiro xaalad deggan, markaa kuma haboona cabbirka joogtada ah ee garaaca wadnaha inta lagu jiro isboortiga.
Sawir gacmeedka Green Light wuxuu ka kooban yahay LED dherer dhererkiisu dhererkiisu socdo iyo dareemayaal sawir qaada oo ku yaal dhabarka dambe ee qalabka wadnaha. Mabda'a wuxuu ku saleysan yahay isbeddelada cufnaanta xididdada dhiigga ee gacanta inta lagu jiro garaaca wadnaha, taasoo keenta isbeddelada gudbinta iftiinka. Laydhka soo-baxa iftiinka iftiinka dhererka dhererka dhererka dhererka iftiinka, dareemayaasha sawir qaadista lehna waxay soo qaadaan iftiinka oo ka muuqda maqaarka gacanta waxayna cabbiraan isbeddellada ku yimaada xoogga aagga iftiinka waxayna u beddelaan garaaca wadnaha. Teknolojiyada waxaa hada adeegsada Mio Alpha, Fitbox HXM iyo Adidas Smart Run kormeerayaasha heerka garaaca wadnaha Mareykanka. Qiyaasta cagaarka iftiinka cagaaran ee sawir-qaadaha ayaa si buuxda uga tagey wadnaha garaaca wadnaha, wuxuuna si isdaba joog ah u cabbiri karaa garaaca wadnaha, xisaabiyaa celceliska garaaca wadnaha, diiwaangelin karaa heerka garaaca wadnaha ugu badan, dejiya inta u dhexeysa heerka garaaca wadnaha.
Taxanaha Jimicsiga Dadweynaha
Qaybta ugu muhiimsan ee taxanaha jirdhisku waa illaa 18 qaabab jimicsi. Habka jimicsiga wuxuu ku saleysan yahay xaaladooda jir ahaaneed si toos ah ayuu u tijaabiyaa heerka jimicsiga wadnaha ee shaqsiga. Waxay xaqiijineysaa in jimicsi kasta oo aad sameyso uu yahay mid waxtar leh oo ammaan ah.
Xitaa waad isticmaali kartaa laba astaamood oo u gaar ah horumarka aagga garaaca wadnahaaga iyadoo ku saleysan yoolalka jirdhiskaaga. Intaas waxaa sii dheer, Fitness Series wuxuu la yimaadaa silsilad silsilad raaxo leh oo bixisa macluumaad sax ah, oo ah waqtiga dhabta ah ee garaaca wadnaha inta lagu jiro jimicsigaaga. Taxanaha jimicsiga dadweynaha ee inta badan dadka jecel jimicsiga, dhaqaale ahaan, waa dookhaaga koowaad.
Xaqiiqdii waxay u baahan tahay go’aan qaadasho iyo geesinimo si aad u noqoto orodyahan wanaagsan.
Haddii aad rabto inaad wax ka sii fiicnaato, waxaad u baahan tahay inaad madaxaaga isticmaasho. Kormeeraha Heerka Qiyaasta Wadnaha wuxuu u beddelaa macluumaadka xawaare, kaas oo kaa caawin kara inaad ku guuleysato waxqabadka ugu wanaagsan oo aad iska ilaaliso dhidid la'aanta inta lagu jiro jimicsigaaga.
Baaskiil Taxane ah
Waxay si sax ah ula socon kartaa garaaca wadnaha, masaafada baaskiilka, xawaaraha, waqtiyada dhabta, soo saarida awooda iyo khariidada wadada.
Kuu suurtogelineysa inaad siideyso tamarta ugu badan sida cayaaraha xirfadleyda ah.
Taxanaha Maareynta Culeyska
Waa shakhsi. Waxay kuu habeyn doontaa barnaamijka xakameynta culeyska, adiga oo kuu sheegaya inta miisaan ee ay tahay inaad ku lumiso habka iyo goorta. Muhiimad ahaan, kormeeraha heerka garaaca wadnaha ayaa kaa ilaalin doona xadka bulsheed, oo ah hage jimicsi.
Ilaa intaad ku xidhnayd curcurkaaga oo aad uun raaceyso talada barnaamijka maalin kasta, waxaad si tartiib tartiib ah u gaari kartaa culeyskaaga wanaagsan. Waxay ku dhiirrigelin doontaa oo kaa caawin doonta inaad dhiirrigeliso. Way fududahay in la isticmaalo oo lala socdo horumarkaaga maalin kasta iyo toddobaad kasta. Waxay kaa caawin kartaa inaad gaarto oo aad ilaaliso culeyskaaga saxda ah, taas oo kuu oggolaaneysa inaad ku guuleysato natiijooyinka jirdhiska ee joogtada ah.